महिनावारी पछि सार्न औष`धि लिनु स्वास्थ्यको लागि कतिको हानिकारक छ ? डाक्टरको यस्तो छ सल्लाह (भिडिओ) – List Khabar
Home / समाचार / महिनावारी पछि सार्न औष`धि लिनु स्वास्थ्यको लागि कतिको हानिकारक छ ? डाक्टरको यस्तो छ सल्लाह (भिडिओ)
महिनावारी पछि सार्न औष`धि लिनु स्वास्थ्यको लागि कतिको हानिकारक छ ? डाक्टरको यस्तो छ सल्लाह (भिडिओ)
admin December 26, 2021 समाचार Leaveacomment 175 Views
महिनावारी सुकेका महिलामा ६ महिनामा र`गत बगेको देखियो भने यसलाई ख`तराको संकेतको रुपमा मानेर चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ।
महिनावारीको समय`मा देखिने समस्या र गडबढी`लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलमा कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सलिना शाक्यसँग हामीले भिडियो कुराकानी गरेका छौं।
महिनावारीको समयमा महिलाले दुई खाले स`मस्या भोग्छन्। एउटा दुःखाई र अर्को रगत बग्ने। महिलाको महिनावारी हुनुभन्दा पहिला ढाँड, पेट निकै दुख्छ। सामान्य दुःखाइले आफ्ना गतिविधिलाई असर गर्दैन। कतिपयलाई सामान्य दैनिक गतिविधि`लाईसमेत असर पर्नेगरी दुख्छ।
अर्को समस्या रगत धेरै बग्नु र महिनावारी अनियमित हुनु हो। सामान्य अवस्थामा २८ देखि ३५ दिनमा महिनावारी हुन्छ।२१ दिनभन्दा पहिला र ३५ दिनपछि महिनावारी हुनुलाई भने अनियमित महिनावारी भनिन्छ।
कहिलेकाही महिना`वारी नियमित हुन्छ तर रगत धेरै बगेको हुन्छ। यसरी रगत धेरै जाने र अनियमित महिना`वारी हुने पनि हुन्छ। यस्तो समस्या महिनावारी रोकिने समयमा हुन्छ। ४५ वर्षदेखि ५२ वर्षको विचमा हुन्छ। अर्को महिना`वरी सुरू हुँदा (१४-१६ वर्ष) मा पनि धेरै रगत बग्ने र अनियमित हुने हुन्छ।
पाठेघरको मुखको क्या`न्सर हुने अथवा यसको लक्षण देखिँदा पनि रगत बग्छ। त्यस्तै पाठेघर भित्रको समस्या`ले गर्दा रग`त बग्ने समस्या हुन्छ। पाठेघरभित्र मासुहरू बढ्दा समेत समस्या आउँछ।
महिलाले आफू`लाई आवश्यक परेको बेलामा महिना`वारी पछि सार्न औषधि लिन्छन्। यस्तो गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानि`कारक हुन्छ। यो प्राकृतिक चक्र`लाई असर पर्ने काम गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदैमा देवी देवताको पूजा गर्न हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास हटाउन हामीले किशोर महिलालाई काउन्सि`लिलङ गर्न जरूरी छ।
महि`नावारीको समयमा महि`लामा टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने र धेरै तनाव हुने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा महिला`लाई रिस उठ्ने, छटपटी हुने हुन्छ। यो सबैमा हुन्छ भन्ने होइन। हर्मोनमा आएको परिवर्तनले यस्तो हुन्छ। यसमा अरू केही कारण छैन भनेर काउन्सिलिङ गर्न जरूरी छ।
Previous यी मोडेल जसले आफ्नै पिताको शव अगाडि यस्तो हर्कत गरेपछी तस्बिर बन्यो भाइरल, आखिर के गरिन उनले जसले गर्दा संसार छक्क पर्यो ?
Next जाडो महिनामा बिहानै खानुस् यी खानेकुरा, स्वस्थ रहन्छ शरीर…